Ciidamo Uu Horkacayey Jeneraal Saadaq Joon Oo La Wareegay De... » Axadle Wararka Maanta
Ethiopian troops recaptured two strategic towns from rebel fighters
Ciidamo uu horkacayey Jeneraal Saadaq Joon oo la wareegay de…
By Abdiwahab Ahmed	 Last updated Jul 18, 2021
Cadaado (Axadle) – Wararka laga helayo gobolka Mudug ee bartamaha dalka ayaa sheegaya in maanta ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda ay gudaha u galeen deegaanka Camaara ee gobolkaasi, kadib markii ay weerareen deegaankaasi.
Camaara oo ay in muddo ah gacanta ku hayeen xoogaga Al-Shabaab ayaa waxaa saaka la wareegay ciidamada huwanta, waxaana horkacayey saraakiil sar sare oo uu ka mid ah yahay General Saadaq Joon oo ku sugan deegaano ka tirsan maamulka Galmudug.
Ciidamada huwanta ayaa lagu soo waramayaa inay dagaal kooban la galeen Al-Shabaab, waxaana, kadib u suuragashay inay qabsadaan deegaankan oo ah mid istaraatiiji ah.
Sidoo kale ilo dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay in ciidamadu ay fariisimo cusub ka sameysteen halkaasi, isla-markaana ay wadaan dhaq-dhaqaaq ka dhan ah Al-Shabaab.
Ethiopian troops recaptured two strategic towns from rebel…
Xaaladda ayaa aad u kacsan, waxaana dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan inay soo rogaal celiyaan xoogaga Al-Shabaab, kadibna uu dagaal ka dhaco halkaasi.
Howl-gallada milatari ee ka socda deegaanada Galmudug oo uu haatan ku biiray General Saadaq Joon ayaa ah kuwa la doonayo in looga adkaado dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Camaara oo marar kala duwan ay isku bedaleen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa u dhow deegaanka Bacaadweyne oo ay shalay la wareegeen ciidamada huwanta.
Mudug oo ay howl-gallada xoogooda ka socdaan ayaa waxaa sidoo kale ka jira is uruursi ay wadaan xoogaga Al-Shabaab oo weli gacanta ku haya qeybo ka mid ah gobolkaasi.